Yintoni i-EPA | Ezezimali
Encarni Arcoya | 17/10/2021 20:18 | Ukuhlaziywa ukuba 17/10/2021 20:35 | Ngqesho
Wakhe weva nge EPA? Ngaba uyazi ukuba yintoni? Sisifinyezo soVavanyo lwaBemi oluSebenzayo, olwaziwa kakuhle, kodwa ababaninzi abakhumbulayo ukuba bathathe inxaxheba kulo.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into ebandakanywa yi-EPA, yeyiphi injongo eyenziweyo, ukuba isebenza njani kwaye uyiqonda njani, sikunika izitshixo zokwenza njalo.
1 Yintoni i-EPA
1.1 Iingcamango eziphambili ze-EPA
2 Yintoni injongo ye-EPA
3 Njengoko kucacisiwe
Njengoko besesitshilo ngaphambili, i-EPA sisichazi segama elithi Uphando oluSebenzayo lwaBemi. Yisifundo seenkcukacha manani apho kuqokelelwa khona idatha kwimakethi yezabasebenzi nalapho inani lokungaphangeli libalwa khona.
Ngamanye amagama, sithetha ngoxwebhu oluseke ukuvela kwemarike yezabasebenzi, ukwahlula abantu abakhutheleyo (abasebenzi) kwabangasebenziyo (abangasebenziyo).
Kwimeko apho ungazi, i-EPA ibikhona ukusukela ngo-1964 kwaye injongo kukwazi imeko yabemi, oko kukuthi, ukuba baxakekile, bayasebenza, abaphangeli okanye abenzi misebenzi. Kodwa ayenziwa kwizigidi zabantu baseSpain, kodwa yenziwa kwisampulu yeentsapho ezingama-65000 kwikota nganye. Ngamanye amagama, iintsapho ezingama-200000 "zenziwa udliwanondlebe" ngonyaka.
Iingcali ezininzi zikuthelekelela oko "Olona phawu lubalaseleyo lokwazi ukuvela kwengqesho kunye nentswela-ngqesho", Nangona abanye becinga ukuba iphelelwe lixesha, ukongeza kwinto yokuba akunakwenzeka ukwazi ukuba idatha iyinyani, ngakumbi kwimeko yomsebenzi kwi-B okanye kwiimeko apho umntu asebenza khona kodwa engagunyaziswanga (uhlala engasebenzi kodwa works).
Iingcamango eziphambili ze-EPA
Ukuqonda iziphumo eziphuma kwi-EPA, kufuneka kuthathelwe ingqalelo iikhonsepthi ezingundoqo ezichonga ukuba leliphi na iqela lomntu. Zezi:
Kuya kuba malunga abantu abali-16 nangaphezulu kwaye abafumanekayo ngomsebenzikodwa abakafumani msebenzi okwangoku.
Nangona kunjalo, bajonge ngenkuthalo umsebenzi wokungena kwintengiso yabasebenzi.
Bangabantu, nabo bane-16 okanye ngaphezulu, ngoku abanomsebenzi. Oko kukuthi, banegalelo kwimarike yomsebenzi kunye nomsebenzi wabo ngokutshintshela umvuzo.
Ngokulandelayo, aba bantu bahlulwe baba ngabasebenzi abaqeshiweyo (abohlulwe babucala naseburhulumenteni), kwaye bayazisebenza (abaya kuba bezisebenza, oosomashishini ngaphandle kwabasebenzi, abaqeshi, njl.
Olunye udidi oluthathelwa ingqalelo kukuba umntu usebenza ngokusisigxina okanye ngokungesosigxina.
Eli qela liza kubandakanya abantu abali-16 okanye ngaphezulu abangasebenziyo ngoku, ziyafumaneka kwaye zikhangela umsebenzi.
Kutheni le nto bethathwa njengabangaphangeliyo kwaye abangasebenziyo? Ewe, ngenxa yokuba badlula kwezi meko zilandelayo:
Baye kwi-ofisi yengqesho yoluntu ukuya kufuna umsebenzi.
Baye kwiofisi yengqesho yabucala bekhangela umsebenzi.
Basebenza ngokungenisa izicelo zabo zemisebenzi enokwenzeka.
Baphendule kwizithuba zemisebenzi.
Bathathe inxaxheba kwiinkqubo zokukhetha abasebenzi.
Banomsebenzi abalinde ukujoyina.
Okokugqibela, ukungasebenzi kuyaqwalaselwa yi-EPA njengabantu abaneminyaka eyi-16 okanye ngaphezulu engafakwanga kwezinye iindidi.
Ngokwenyani, banokuba ngabantu abangenawo umsebenzi kodwa abangawufuni.
Yintoni injongo ye-EPA
Njengoko isekiwe kuPhando loMsebenzi, iinjongo ezilandelwa yi-EPA Zizo:
«Yazi imisebenzi yezoqoqosho ngokunxulumene necandelo lomntu. Ijolise ekunikezeleni idatha yeendidi zabemi ngokubhekisele kwimarike yezabasebenzi (abaqeshiweyo, abangaphangeliyo, abasebenzayo, abangasebenziyo) kunye nokufumana ezi ndidi ngokweempawu ezahlukeneyo. Ikwenza ukuba kube nakho ukwenza ngokulandelelana kwexesha kuthotho lweziphumo. Okokugqibela, njengoko iinkcazo kunye neenqobo ezisetyenziswayo zihambelana nezo zimiselwe yimibutho yamanye amazwe ejongene nemicimbi yezabasebenzi, ivumela ukuthelekiswa kwedatha evela kwamanye amazwe.
Iziphumo ezichaziweyo ziyafunyanwa kwiqela lesizwe. Kuluntu oluzimeleyo nakumaphondo, ulwazi lubonelelwa ngeempawu eziphambili nenqanaba lokwahlulwa okuvunyelwe kukungalingani kokuhluka koqikelelo ”.
Ngamanye amagama, injongo yayo kukwazi ukuba leliphi iqela labantu elisebenzayo, eliqeshiweyo, elingasebenziyo nelingasebenziyo.
Ukuqonda ukuba isebenza njani i-EPA, into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba Iikhrayitheriya ezilandelayo zezi zichazwe nguMbutho wabaSebenzi weHlabathi (MNA LO). Njengoko besesitshilo ngaphambili, yenziwa ngekota kwiqela labemi leentsapho ezingama-65000. Iminyaka yobudala kufuneka ibe phakathi kwe-16 kunye ne-74 yeminyaka ubudala. Bonke abantu bale minyaka "banyanzelekile" ukuba basebenzisane ngokunika ulwazi oluchanekileyo.
Ngoku, ukuba bonke abantu bosapho bayala udliwanondlebe lokuqala, elo qela losapho linokutshintshwa lelinye. Kodwa ukuba oku kuyenzeka emva kodliwanondlebe lokuqala kuya kunyanzeliswa ukuba baphendule emva kwexesha (kwikota ezintathu ezizayo).
Ngaba oko kuthetha ukuba sinokuzikhanyela? Ewe, rhoqo kudliwanondlebe lokuqala kunye nokwala ngamxhelo mnye kusapho lonke. Ewe kunjalo, kufuneka ugcwalise iphepha lemibuzo elibi.
Abo balwamkelayo udliwanondlebe baya kuthotho lweesaveyi. Eyokuqala yazo yenziwa buqu kwaye buqu, buqhutywa ngabavavanyi-ndlebe abavela kwi-INE (iZiko leSizwe lezeNkcukacha-manani) ngelixa ezinye zinokwenziwa buqu okanye ngefowuni).
Ukwenza oku, umntu ngamnye uyacelwa ukuba enze njalo ubeneveki engaphambi kodliwanondlebe njengexesha ekubhekiswa kulo.
Idatha ihlala yenziwa esidlangalaleni ukuphela kuka-Okthobha, uJanuwari, u-Epreli noJulayi, inikezela ngedatha eneenkcukacha kubemi.
Njengoko ubona, into eyi-EPA kulula ukuyiqonda. Ngapha koko, kubo bonke ubomi bethu kunokwenzeka ukuba, ngaxa lithile, wafumanisa ukuba ukhethwe yi-INE ukuba ube yinxalenye yoPhando loMkhosi, uyawukhumbula loo mzuzu? Zeziphi iintlobo zemibuzo abakubuze yona? Ungaphinda usebenze naye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Yintoni i-EPA